MindMapping na Njikọ Aka maka Enterprise | Martech Zone
Onye ahịa anyị, Mindjet, amalitela onyinye ọhụrụ enyere maka ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, ha wepụtara mmelite na Njikọ ha njikwa ọrụ arụ ọrụ Ngwaahịa - na-eweta njikọta zuru oke n'ofe Weebụ, desktọọpụ na ngwaọrụ mkpanaka maka oge ọ bụla, na mmekorita ọ bụla (yana a ọhụrụ website iji kwekọọ na ngwọta ọhụrụ).
Mindjet Jikọọ V4 na-aga n'ihu na mbido ngwaahịa iji nye otu ahụmịhe onye ọrụ na-ejikọ echiche na atụmatụ na igbu nke atụmatụ ndị ahụ.
Mindjet Jikọọ ndị ọrụ ugbu a
Nzọụkwụ kachasị elu n'etiti ọhụụ na Action ọcha nke Jikọọ, na -emepụta otu, ahụmịhe weebụ na-enweghị ntụpọ nke na-esonyere mmekorita iji mepụta echiche, atụmatụ na atụmatụ, yana ikike ịkekọrịta na soro usoro site na mmezu na mmecha.
Otu akara ngosi dị mfe site na Google na Facebook maka ngwa ngwa na mfe ịnweta ngwaahịa a
Njikọ dị na ngwaahịa na vidiyo mmekọrịta
Nchekwa nwere ohere dị na 2GB maka Basic / 5 GB maka azụmaahịa
Na-abịa oge adịghị anya! Mindjet Jikọọ mwekota na gam akporo
Dịka akụkụ nke mgbanwe Mindjet, ụlọ ọrụ na-akpọsa onyinye ọhụrụ enyere maka ụlọ ọrụ, otu na ndị mmadụ n'otu n'otu na-egosipụta nke ọma otu azụmaahịa si eji Mindjet emekọ ihe. Onyinye ohuru a na-elekwasị anya iji gboo mkpa ndị ahịa. Onyinye niile gụnyere Onye njikwa, Mindjet's legendary desktop software, na Mindjet mobile ngwa.
Ezubere Mindjet maka òtù dị mkpa imekota na otutu ndi otu ime na ndi ozo, na-enye ma igwe ojii na-adabere ma na-arụ ọrụ na ọrụ ọkachamara na nkwado.
Ndị ọrụ nwere ike ịpụ ngwa ngwa ebumnuche na atụmatụ wee mezuo ngwa ngwa na atụmatụ ndị ahụ ozugbo ma na igwe ojii nke ọha (site na jikọọ) ma ọ bụ na gburugburu ebe nchekwa SharePoint dị nchebe (site na Jikọọ SP).
Mindjet gụnyekwara ndebiri ndebiri yana ịjụ ọzụzụ ọzọ, ọrụ ndị ọkachamara, yana mkpa ndị ahịa yana nkwado.
Mindjet maka otu bụ maka ngalaba na otu ndị chọrọ ịga ọsọ ọsọ site n'echiche gaa na atụmatụ igbu. Ndị ọrụ na-enweta Mindjet siri ike nke MindManager yana iji echiche ya siri ike na atụmatụ ya, Mindjet Connect's Vision na Action modul, yana ngwa ngwa ngwa ngwa nke Mindjet ka ha nwee ike rụkọta ọrụ ma kesaa ọrụ n'agbanyeghị ọnọdụ, ikpo okwu ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla.
Mindjet maka ndị mmadụ n'otu n'otu bụ ngwaahịa zuru oke maka ndị ọrụ ozi chọrọ mkpa echiche, jikwaa ozi yana kesaa ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Ndị ọkachamara na-enweta Mindjet siri ike nke MindManager ya na atụmatụ ya siri ike na atụmatụ, yana Mindjet Jikọọ na Mobile ịkekọrịta ọrụ n'agbanyeghị ọnọdụ, ikpo okwu ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla.
Banye maka Mindjet ugbu a… a isi akaụntụ free!
Tags: mmekotajikọọenterpriseMindjetitinye uchenyiwenjikwa ọrụntụgharị ucheotungwaọrụ
Social Media - Successga nke Ọma Na-enweghị Atụ